Myanmar Local News: ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး ကျွန်ုပ်တို့ ဘာကြောင့် လက်မှတ်မထိုးတာလဲ (ပြည်သူ့အသံ)
၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး ကျွန်ုပ်တို့ ဘာကြောင့် လက်မှတ်မထိုးတာလဲ (ပြည်သူ့အသံ)
Ko Htike Gyi : ပြုပြင်ပြောင်းလဲမူ့ထက် ရယူလိုစိတ်တွေ အရမ်းများနေလို့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကိုပြင်ဖို့ လုပ်နေတာ လို့ ထင်မြင်မိတယ် အစိုးရဘက်လိုက်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး ကျတော်လည်းအစိုးရကို မုန်းပါတယ် ဒါပေမယ့် သူတို့ပါတီထဲမှာရော နေရာလုနေတဲ့ သူတွေ တပုံကြီး တယောက်နဲ့တယောက် ချောက်တွန်းနေတဲ့ သူတွေ တပုံကြီး အပြောကောင်းနေရုံနဲ့မပြီးဘူးလေ လက်တွေ့တခုလောက် အစိုးရအပြင်ကနေ ပြည်သူတွေ အားရအောင်ပြုပြင်ညပြောင်းလဲမှု့တခုလောက်လေးပဲလုပ်ပြပါ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာအဓိကဖြစ်ရမယ် မလေးရှားကို အတုယူပါ သူတို့ကအစ္စလန် နိုင်ငံ ဘာသာစုံရှိတယ် သူတို့ဘာသာနဲ့တခုခုဖြစ်လာရင် အစိုးရက ဘာသာဘက်ပဲရပ်တည်တယ် ဘာသာရေး ဥပဒေတွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ် ကြပ်မှတ်ထားတယ် ဒေါ်စုသမ္မတဖြစ် ဒီလိုဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ပါ့မလား သူအုပ်ချုပ်မှာ အများဆုံး ဆယ်နှစ် သူသေရင် NLD ကကုလားတွေက တက်လာပြီ နောက် NLD မှာကုလားတစု အုပ်စိုးမယ် ပြီးရင်တိုင်းပြည်ကြီးကို အုပ်စိုးမယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာ ဒေါ်စုမှာမူတည်နေတယ်လို့ မထင်ဘူး တနိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ် မတရားရင် အားလုံးဆန့်ကျင်ကြပါ တစုတဖွဲ့က ဆန့်ကျင်နေရုံမပြီးပါဘူး
သား ဦး : ဒေါ်စု တော့သမ္မတ လုပ်စေချင်တယ် ဒါပေမယ့် ဒီဥပဒေကြီးတော့ တသက်လုံးမပြင်စေချင်ဘူး ကိုယ့်နိုင်ငံသမ္မတက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာမိသားစု မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်တွေနဲ.ဖွဲ.စည်းထားတဲ့မိသားစု ပဲဖြစ်စေချင်တယ် .... နောင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးတည်တံ့နေသမျှ သမ္မတရာထူးရတဲ့သူကို ကုလားတွေ တရုတ်တွေနဲ. တခြားနိုင်ငံသား သွေးတွေမပါစေချင်ဘူး
Kanithar Koko : မျှဝေပေးတဲ့လူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒေါ်စုကြည်သမ္မတဖြစ်ရင် ကုလားနိုင်ငံဖြစ်မှာ ခုတောင်သူဘေးကယာဉ်မောင်းကုလားမွတ်စစ်စစ် မယုံရင်ကြုံတဲ့အခါမှတ်မှတ်ရရကြည့်လိုက်ပါ ကုလား လင်ယူဖို့လုပ်ခဲ့သေးတယ် မိခင်က ဗိုလ်ချုပ်မျက်နှာနဲ့ တိုင်းပြည်မျက်နှာကို ထောက်ပါ အိန္ဒိယသမ္မတ နေရူးကို အသားနားခံပြီးကုလားဘက်ကိုလျှော့ခိုင်းရတာ ဘယ်လောက်များကုလားကြိုက်လဲ
John Myat : ဘာရယ်ညာရယ်မပြေချင်ပါဘူး မလေးနဲ့လာနှိုင်းနေလ်ု့ပြောပါရစေ ဒို့နိုင်ငံမှာ ယဉ်ကျေးမှု လူမှုရေး သာရေး နာရေး ဝိုင်းဝန်းကူညီဖေးမတဲ့စိတ်ဓါတ်၊အဖေ အမေ အိုကြီးတွေ ပြန်လည်စောင့် ရှောက်တဲ့စိတ်ဓါတ် ၊အလုပ်ထဲမှာလဲသာရေးနာရေးရှိရင်နားလည်မှုခွင့်၊ တစ်ယောက်လုပ်စာကို မိသားစုမှ ဝေစားနိုင်တယ် တို့လူမျိုးတွေက ပျော်ရွှင်တယ်ရိုင်းပင်းကူညီတတ်တယ် (များသောအားဖြင့်)၊ရွာကနေ မလေးလောက်ရောက်ပြီး ဟိုဟာလာကျယ်မနေပါနဲ့ တို့နိုင်ငံတို့လူမျိုးက အားသာချက်တွေ အများကြီးပါ ၊
Su Myat : တိုင်းပြည်ကြီး တိုးတက်ဖို့ အတွက် လူမိုက်အလိုမရှိပါ။ ပညာရှိသုခမိန်သာ အလိုရှိပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးသာလျင် ပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။
Than Htike : ဒေါ်စုရေ....စိတ်တော့မကောင်းဘူးဗျာ....နွေခေါင်ခေါင်မှာ ဦးထုတ်မပါရင်နေပါစေ -ီး ခွန်တော့ မဆောင်းပါရနဲ့...... ဘာကြောင့်လဲသိလား....ကျွန်တော်က ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်လို့.... မြေ..နေအိမ်ယာတွေ ပျောက်သွားပါစေ ကြိုးစားပြီးရအောင်ပြန်ရှာမယ်လို့ရတယ်..... ကုလားပေါလာမဲ့ ဒေါ်စုလက်ထက်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာတော်ဟာ ဘယ်လိုမှရှာလို့ရတော့မှာ မဟုတ် လို့ဘဲ....
Ko Zay : မြန်မာလူမျိုးများ သတိ အသိရှိကြပါစေ..။
Aswe Taw : နောင်ှ့ရေးကိုကြည့်ကြပါ နောင်တချိန်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ် လူတိုင်းမှာရှိသင့်ပါတယ်
Thar Thar Lay : ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မြန်မာလူမျိုးတွေ ဒါလေးကိုဖတ်ပြီး အသိတရားရကြပါစေ
ကနောင် မင်းသား : English/Japanခေတ်တွေ မှာလဲ ကျွန်စော်နံသူတွေ အများအပြားပါဘဲ၊ ဒီ ခေတ်မှာလဲကျွန်စော်နံ သူရှိမှာပါပဲ၊ထမီ နားခိုစားတဲ့သူတွေကဘုရားရှင်လက် ထက်ထဲကရှိခဲ့ တာပါ၊ ဒါသဘာဝပါပဲ။
Mar Soe : နိုင်ငံရေးတော့ နားမလည်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ အန်တီစု ကိုတော့ သမတမဖြစ်စေချင် ပါဘူး ဘေးကပြည်သူလူထုအတွက် ကူညီပေးနိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ဘဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်
Yethu Tlm : ဒေါ်စုနာမည်ကျော်တာတော့ ဟုတ်ပါတယ်သူရောက်ကတဲ့ ဘာလုပ်ဆောင်ချက်ရှိလဲလက်ပံတောင်း ရခိုင် မိတ္ထီလာဘယ်သူ ဘက်မှာရပ်တည်လဲပြတ်ပြတ် သားသားဘာ စကားပြောလဲပြောတော့ပြောပါတယ် လူများစုက လူနည်းစုကို အနိုင်ကျင့်တယ်တဲ့ သူလင်တွေအရင် စကျင့်လို့ပြဿနာကြီးထွား သွားတာကိုမပြောဘူး အပေါ်သူရ အပါဝင်ထောက်ခံတဲ့မအေး-ိုးတွမသိဘူးလားနလပိန်တုံးတွေသူသားအကြီးကောင်မူဆလင်ဝင် တာကောသိလားမင်း တိုညီမမုတ်ဆိတ်တွေဆီ အပ်လိုက်ငါတို့ကတော့ အသက်လဲပလိုက်မယ်အဲ့ ဖာသယ်မ ဘယ်တော့မှ သမ္မတမဖြစ်ဘူး မှတ်ငါ-ိုးမဟာတွေမရိုင်းချင်ဘဲရိုင်းလိုက်တယ်
Kyaw Zin : ကိုယ့်တို့မိသားစုကို အုပ်ထိမ်းမယ့်အုပ်ထိမ်းသူကို ဘယ်သူတွေက. ပထွေးကိုအဖေနေရာပေးချင်မှာလည်း..အဖေကိုကျော်ပီး ပထွေးတော့မလွမ်းပါရစေနဲ့..... ဒါပေမယ့်လည်း ပထွေးအဖေခေါ်ချင်သူတွေလည်းရှိနေတာဘဲနော်...
Aung Ko Lat : ဒေါ်စုကြည်ရေ ခင်ဗျားလုပ်ရပ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ တွေကဘယ်သူ့ ကိုမဲပေးလို့ဘယ်သူ့ ကိုအဖေခေါ်ရမှာလဲဗျာ စဉ်းစားကြည်ပါ အုန်းံ
Ukyawsan Win : အမှန်ပြောလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Thar Gyi : ဒေါ်စုချည်ပဲတမ်းတနေတာ သူက လွဲလို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ သမတ္တလုပ်မယ့်သူမရှိတော့ဘူးလား
Thar Gyi : အဲဒီ လက်မှတ်ထိုးနေတဲ့ သူတွေက တဖက်ပိတ်နေတာ
Thar Gyi : ဒေါ်စုက myanmar express ရေးတဲ့အတိုင်း လုံးဝကြီး တခုမှ လုံးဝ(လုံးဝ) မဖြစ်ပါဘူးလို့ ပြည်သူတွေရှေ့ ပြောမယ့်တနေ့ လက်မှတ်ထိုးပါမယ်
Bwe Thi : ကျေးဇူးပါတပည်တွေဖတ်ခိုင်းရအုန်းမယ်
Dinngar Dinngar : NLD ဆိုမကြားချင်လောက်အောင်မုန်းတယ် တစ်ယောက်မကျန်မုန်းတယ်
Sai Sai : အော်... သူက တလမ်းမောင်း စောင်းနေတာ ကိုး
Zeyar Nyunt : မှန်ပါတယ်လက်မှတ်ထိုး တ့ကောင်တွေကနားမလည်ပဲ န့ထိုးပြိးကုလား. တာခံနေရမယ်ဟို ဟာမကြိးကတော့ ခံပြိးသားမထူးဘူး
Wai Lu : right
Zin Wai Yan : မွတ်စု
ကြယ် ဘုရင်မလေး : ၅၉ (စ) ဥပဒေ ကို လုံးဝထောက်ခံပါတယ်
Yekyi Dway : မတိဘူး ခေါင်းရှုပ်လို့သေနိုင်တယ်
Awaine Kg : အမျိုးတော့ အထိခိုက်မခံဘူးစစ်ဖိနပ်အောက်ပဲ ကြိတ်မှိတ်နေတာ အကောင်းဆုံးပဲ....
Moe Min : သမ္မတဖြစ်ဖို့ အဲလိုတောမလုပ်သင့်ပါဘူး ဒေါ်စု
Hong Gele : အမျိုးဖျက်မ နင်ထွက်သွားတော့
Ronal Hein : ရေးထားတာသိပ်မှန်တယ် မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံပါ
Pannlay Pyaycho : ရေးထားတာတွေအားလုံးအမှန်တရားတွေပါပဲ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်ဘာ သာသာသနာကိုချစ်တယ် ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးအသိတရားရှိဘို့ကောင်းနေပြီ
Yeni Kyaw Htin : ရေလာလို့ချောင်းပေါက်ပြီဆိုရင် လမ်းမှာရှိတဲ့ အမှိုက်တွေက အလိုလိုပျောက်သွား စမြဲပါ။
Bolay Bolay : this is myanmar country , not 786. we are not support in NLD and suu kyi
Bolay Bolay : this myanmar country .this is 786 country
Thet Hnin Eain : အရမ်းကောင်းတဲ့စာသားပါ။ အသိမရှိလို့ မသိသူထက်သိတဲ့သူက ပိုအသိရှိ လာတာပေါ့။
Su Wintsan : ကောင်းလိုက်တဲ့ရေးချက် ဒါမျိုးတွေများများဖေါ်ပြမှ တိမ်ဖုံးနေတဲ့သူတွေ အသိတရား ရလာမှာ
ကို လူအေး : တကယ်မှန်တာတွေပါပဲဗျာ။
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=643358335758292&set=a.311880272239435.71120.256578141102982&type=1&relevant_count=1 တွင် ရေးသားထားသော ပြည်သူ့အသံများကို ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြသည်။